Wararkii: Feb 5, 2007
Dowladda Kenya oo sheegtay inay ku saxsaneyd Celistii..
Kulan looga hadlayo dib u heshiisiinta oo maanta ka furmaya ..
Dowladaha Mareykanka iyo Yemen oo wada dadaal dib u heshiisiineed...
Saraakiil ka socotay dalka Uganda oo booqdey gobo ku yaal.
Kulan looga arisanayey xaaladda nabadgelyo ee muqdisho oo...
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Meles Zenawi ayaa waxa uu sheegay in uusan marnaba sugi doonin imaanshaha ciidamada Nabad ilaalinta ee Midowga Afrika, balse uu ciidamadiisa sida ugu dhaqsiyaha badan ugala bixi doono dalka Soomaaliya, “Wax badan ayaan u sheegnay in Midowga Afrika ay soo diraan ciidamo nabad ilaalin ah, basle waxaan dareenay in aan dheg jalaq loo siineyn codsigayaga” ayuu yiri Meles oo sheegay in hawshii ay u tageen ciidamada Itoobiya Soomaaliya laga gaaray guul wax ku ool ah.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu sheegay in bisha Feebaraayo askari Itoobiyaan ah lagu arki doonin dalka Soomaaliya. Ra’isul Wasaaraha ayaa hadlakaan waxa uu sheegay mar uu la kulmay wafdi ka socday Midowga Afrika, waxayna wafdigaasi sheegeen in Dowladda Itoobiya looga baahan yahay in aysan meel cidla ah uga tegin hawshii ay ka qabatay gudaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Itoobiya ayaa waxay cadaadis fara badani kaga imaanayaa beesha Caalamka iyo waliba mucaaradka dalka Itoobiya kuwaas oo dalbanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ugala baxo ciidamadiisa dalka Soomaaliya, waxaa kaloo Ra’isul Wasaaraha Itoobiya cadaadis kaga imaanayaa dhaqdhaqaaqa ka socda xuduuda u dhexeysa Itoobiya iyo Ereteriya kaddib markii halkaasi Ereteriya soo dhoobtay ciidamo aad u xoogan kuwaas oo xitaa la sheegay inay ka gudbeen goobihii ay ka caaganaayeen ciidamada.
Dowladda Itoobiya waxaa kaloo lagu cadaadinayaa in ay ka qayb-qaadato shirweyne dib u heshiisiin ah oo loo qabto dhamaan kooxaha Soomaaliyeed oo ay ku jiraan Maxaakiimta Islaamiga, waxaana arrintaani wata Dowladda Mareykanka iyo waliba Midowga Yurub. [Sida aad wararka hoose ku arki doontid].
Afhayeen u hadlay Dowladda Kenya ayaa waxa uu sheegay in Dowladda Kenya ay ku saxsaneyd in dalkeeda ay ka masaafuriso kooxihii taageerada u ahaa Maxaakiimta Islaamiga, waxa uuna afhayeenku sabab uga dhigay in kooxahaasi ay qas iyo qalaanqal ka abuuri lahaayeen gudaha dalka Kenya.
“Dowladdu xaq ayey u leedahay wixii dhibaya nabadgelyada Kenya in ay ka hor tagto” ayuu yri afhayeenka oo sheegay in dadkii ay qabatay Kenya ay dib ugu celisay Dowladda Federaalka, isagoo tilmaamay in iyada laga rabo in ay dadkaasi si wanaagsan ula dhaqanto.
Dowladda Kenya waxaa maalmahan eedeeymo uga imaanayeen golaha Muslimiinta dalkaasi iyo waliba mucaaradka kuwaas oo ku eedeeyey Dowladda Kenya inay ku xagudubtay shuruucdii u tiil Maxaabiista adduunka, waxayna sheegeen in wixii dhibaato ah ee la gaarsiiyo dadkaasi ay mas’uuliyadeeda dusha u ridan doonto Dowlada Kenya.
Ilaa iyo 60 maxbuus oo ahaa taageerayaashii Maxaakiimta Islaamiga ah ayaa dhawaan la keenay Magaalada Muqdisho, maxaabiistaasna ilaa iyo hadda war lagama hayo halka ay ku sugan yihiin iyo xaaladooda, iyadoo markii dalka la keenayna ay Dowladda Kenya u gacan gelisay ciidamada Itoobiyaanka.
Maanta ayaa la filayaa in Hotel KAAH ee Magaalada Muqdisho uu ka furmo kulan looga hadlayo dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed, waxaana kulankaan soo qaban-qaabiyey guddiga dib heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed.
Kulankaan ayaa la filayaa in ay ka qaybgalaan dad caan ku ah siyaasadda Soomaaliya, Madax ka tirsan Dowladda Federaalka, Qaybaha kala duwan ee Bulshada, waxaana la sheegay in lagu gorfeyn doono sidii loo heli lahaa dib u heshiisiin dhab ah iyo sida ugu haboon ee hubka looga dhigi karo shacabka Soomaaliyeed.
Waa markii ugu horeysay oo kulan noocaan ah loo qabto ummadda Soomaaliyeed, tan iyo markii ay Dowladda Federaalka ah soo gaartay Magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in kulankaani uu socon doono mudo todobo maalmood ah, iyadoo fikradaha ka soo baxana ay noqon doonaan kuwo saldhig u noqda dib u heshiisiinta qaranka Soomaaliyeed iyo waliba sida ugu haboon ee hubka looga dhigi karo ummadda Soomaaliyeed.
Dowladaha Mareykanka iyo Yemen ayaa wada qorshayaal la doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada Soomaaliya, waxaana dalka Yemen haatan ku sugan ergay ka socda Dowladda Mareykanka oo wada hadalo la leh mas’uuliyiinta wadankaasi.
Dowladda Mareykanka ayaa Dowladda Yemen waxay kala tashaneysaa qaabka ugu haboon ee loo qaban karo shir dib u heshiisiin ah iyo sida la isku soo hor fariisin karo dowladda iyo maxaakiimta islaamiga ah, iyadoo dalka Yemen ay ku sugan yihiin mas’uuliyiin ka tirsan Maxaakiimta Islaamiga ah.
Dowladda Yemen ayaa waxay horey u taageertay sidii loo dhex dhexaadin lahaa Maxaakiimta Islaamiga iyo Dowladda Federaalka, waxayna oso dhaweysay qorshaha Midowga Yurub iyo Dowladda Mareykanka ee dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed.
Ergeyga Mareykanka ayaa la filayaa in uu gaaro dalka Itoobiya halkaas oo uu kulamo kula yeelan doono madaxda dalka Itoobiya oo ay isla soo qaadi doonaan xaaladda Soomaaliya iyo sida ugu haboon ee loo qaban karo shir dib u heshiisiin ah.
Dowladda Federaalka ayaa soo dhaweysay in la qabto shirweyne dib u heshiisiineed, hase yeeshee waxay ku adkeysaneysaa in kulanka dib heshiisiinta ah lagu qabto dalka gudihiisa, waxaana arrintaani sheegay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed mar uu la hadlayey golaha Baarlamaanka.
Waxaa labo maalmood magaalada Muqdisho ku sugnaa saraakiilka tirsan dalka Uganda kuwaas oo qayb ka ahaa wafdi ka socday Midowga Afrika oo indha-indheynayey meelaha ugu haboon ee ay ciidamada midowga Afrika ka hawlgali karaan. Maalintii shalay ahayd ayaa saraakiil ka socotay dalka Uganda waxay booqdeen goobo ka mid ah Muqdisho oo ay ku jireen Dekedda weyn iyo garoonka Diyaaradaha iyo waliba xerooyin ku yaala duleedka Magaalada Muqdisho.
Waxaa la filayaa in dalka Uganda uu noqdo dalka ugu horeeya ee ciidamo nabad ilaalin ah u soo dira Soomaaliya kuwaas oo hoos tagi doona midowga Afrika, hase yeeshee mucaaradka dalka Uganda ayaa ku gacan-saray in Soomaaliya loo diro ciidamo, iyagoo sheegay in Soomaaliya ay weli ka taagan yihiin iska hor imaadyo iyo waliba siyaasado iska soo horjeeda.
Maanta ayaa la filayaa in wafdigaani uu ka ambabaxo dalka Soomaaliya, waxaana lagu wadaa in ay gaaraan magaalada Baydhabo halkaas oo ay kulamo kula yeelan donaan mas’uuliyiinta Dowladda Federaalka ee halkaasi ku sugan.
Ciidamo ka tirsan Maxaakiimta oo lagu arkay deegaanka Bu'aale.
Wararka naga soo gaaray degmada Bu’aale waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan Maxaakiimta Islaamiga ah lagu arkay Degmada Bu’aale gobalka J/dhexe kuwaas oo la sheegay in ay si aad ah u hubeysnaayeen.
Ciidamadani ayaa waxaa lagu waramay in ay halkaasi ka iibsadeen badeecooyin kala duwan, kaddibna ay u dhaqaaqeen dhinaca hawdka.
Dadweynaha deegaanka ayaa si weyn u soo dhaweeyey ciidamadaasi, waxayna dadka u sheegeen in ay dib u soo laaban doonaan.
Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamada Itoobiya ee ku sugan agagaarka Jilib lagu wargeliyey, kaddibna ay galeen feejignaan aad u balaaran.
Dhawaan ayaa agagaarka Afmadoow iyo Dhoobley oo ka wada tirsan gobalka J/hoose lagu arkay ciidamo ka tirsan Maxaakiimta Islaamiga ah, waxayna dadku is weydiiyeen halka ay ka yimaadeen ciidamadaasi, kadibna ayay uga laabteen magaalooyinkaasi, iyagoo halkaasi ka iibsaday waxyaabo ay u baahnaayeen, gaar ahaan raashinka qutul-daruuriga ah.
Dhanka kale Ciidamada Kenya ee ku sugan xuduuda ayaa sidoo kale heegan la geliyey kaddib markii la arkay dhaq-dhaqaaqa ciidamadaasi, waxaana lagu waramay in ciidamadaasi ay markii dambe u dhaqaaqeen dhinaca hawdka.
Ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa deegaanka Dhoobley ayaa halkaasi isaga soo baxay iyagoo isugu soo uruuray Magaalada Kismaayo.
Maalintii shalay ahayd ayaa xarunta gobalka Banaadir waxaa lagu qabtay kulan looga arinsanayey xaaladda nabadgelyo ee Muqdisho oo waayadan u muuqatay mid faraha ka sii baxeysa, waxaana kulankaani ka qaybgalay mas’uuliyiinta ugu sareysa ee gobalka Banaadir.
Mas’uuliyiintaas oo la kulmay madaxda Degmooyinka Gobalka Banaadir ayaa waxaa diiradda lagu saaray sida ugu haboon ee nabadgelyo loogu soo dabaali karo Gobalka Banaadir.
Kulankaan ayaa waxa uu ku soo beegmay xili ciidamada Booliiska ee ka hawgalayey saldhigyada ay weeraro kaga imaanayeen kooxo maleeshi-yooyin ah, waxaana ugu dambeey dilkii loo gaystay sarkaal ka tirsanaa Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Max’ed Cali Khalaf.
Duqa Magalada Muqdisho ayaa sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan gacan bir ah ugu qaban doonaan kooxaha caadeystay in ay caqabad ku nooqdaan nabadgelyada magaalada Muqdisho, waxa uuna sidoo kale sheegay in har iyo habeen ciidanka Booliiska uu hawgali doono, isla markaana aysan waxba u dhimi doonin hawshooda weerarada kaga imaanaya kooxaha dableyda ah ee aan rabin Dowladnimada.
Qoraalkii Hore ee Muraayo halkan ka akhri....